Igbo, John: Lesson 101 - Jizọs rịọrọ arịrịọ maka ndịozi ya (Jọn 17:6-19) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 101 (Jesus intercedes for his apostles)
6 Emere m aha gị nye ndị i nyere m n'ime ụwa. Ha bụ nke gị, ị nyekwara m ha. Ha edebewo okwu gị.
Mgbe Jizọs kwenyesiri ike na Nna ya ga-ewusi ya ike iji mezuo mgbapụta, ọ makwaara na ebube Nna ya ga-abawanye site n'ọmụmụ ọtụtụ ụmụ. Echiche ya kpaliri ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị ọ họọrọ site na ụwa ma jikọta ha na Chineke.
Kraịst mara ndị na-eso ụzọ ya aha ọhụrụ Chineke: "Nna". Site n'ịkpọsa nke a, ha ghọrọ ụmụ ya, ndị a họọrọ n'ụwa. Ọhụụ ọhụrụ a bụ ihe nzuzo nke Chọọchị, n'ihi na ndị kwere ekwe n'ime Kraist agaghịkwa ala n'iyi ọzọ, ma na-eburu ndụ nke Chineke n'ime onwe ha. Ndi amuworo site na Chineke abughi nke onwe ha, kama obu ihe nke Chineke, onye muru ha.
O nyere ha n'aka Okpara ya, onye zitere ha site na obara ya. Ọ bụrụ na i kwere na Kraịst, ị ga-abụ ihe onwunwe ya.
Nna nke Chineke na ndi kwere ekwe 'ibu umu Ya mezuru nime ndi neso uzo site n'okwukwe ha nime ozioma, na idebe okwu ya di oke nma. Okwu ndị a abụghị ihe efu ma ọ bụ na-efunahụ anwụrụ ọkụ dị ka akwụkwọ ozi ojii kachasị edepụta na presses ụwa. Ha bụ okwu Chineke na akwụkwọ ozi ya jupụtara n'ike ike. Onye na-edebe okwu Nna ya n'ime obi ya, na-ebi n'ike Ya.
7 Ugbu a, ha maara na ihe niile i nyere m si n'aka gị, n'ihi na enyewo m ha okwu ndị i nyere m, 8 n'ihi na okwu nile nke I nyeworom ka M'nyeworo ha, ha we natara ha, mara kwa n'ezie na Mu onwem siri n'ebe I nọ puta, ha kwere kwa na Gi onwe-gi ziterem.
Okwu Chineke n'egbugbere ọnụ Jizọs na-emepụta ịzọpụta ihe ọmụma iji gbanwee ndụ rụrụ arụ. Jizos wezuga ozi nke aka ya ma mezuo olu ya site n'ike nke okwu ahu. Ike ya nile na ngozi ya biara anyi nime Okwu nke Nna. Ọkpara ahu ekwuputaghi ihe omuma nke onwe ya, kama o gosiputara ikike, ike, amamihe na ihu n'anya nke Chineke nyeworo ya.
Kraịst nyere onyinye ya kachasị oké ọnụ ahịa: okwu ya. Nke a sitere na Nna ya ka Ọkpara ahụ bụ Okwu Chineke incarnate. Na okwu ahụ bụ ikike anyị. Ya mere, ayi nwere ike nke okwu ahu ma obu ihe omuma ya. Anyị nabatara ihe ịrịba ama ndị a na okwu ndị obi ụtọ. Akụkụ nke ozi ọma ahụ na-eme ka anyị ghọta eziokwu nke Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ.
Anyị na-ahụ ebe a ka Kraịst na-ekpughe n'ekpere ekpere nke ndị na-eso ụzọ ya na nghọta ha banyere okwu ya, n'ihi na ọ ghawo mkpụrụ nke okwukwe na obi ha. Ha ji ọṅụ nabata okwu ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị ozugbo. O wee wụkwasị Mmụọ Ya na ha; okwu ahụ tolitere wee mịa mkpụrụ n'oge nke Chineke. Kraist buru amuma nke a tupu oge aga eme ihe ndia.
Okwu Kraist mere ka okwukwe na ihe omuma dakwasi ndi neso uzo. Gịnị bụ okwukwe ahụ? Ogba nke Okpara site na Nna, nbata nke mgbe ebighiebi, ebube ya n'ebube madu, ihu ya n'anya n'agbanyeghi ikpo asi, ike ya n'adighi ike, chi ya n'agbanyeghi nkewa ya na Chineke n'obe, na ndu ya karia onwu . Mmo Nso guzobere ha nime Onye mgbap ta ha, ha wee gho kwa ndi ah n'an ar ya. Ha anaghị eche echiche banyere ya ruo ogologo oge, ma jidesie ya obi ike mgbe ọ nọ na-ebi na ha n'ụzọ ime mmụọ. Ya mere, ha mara ihe site na nmalite nke Mo Nso nke chi nke Kraist.
Na ndu Kraist, ndi neso uzo Jisos ghotara ihe nke putara: "Onye amuru site na Mo Nso bu Mo Nso." Mmụọ a gọziri agọzi bụ ike Chineke na ndụ nke ndị na-eso ụzọ. O sitere n'okwu Jizos.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka inye anyị okwu Nna gị - okwu ndị jupụtara na ndụ, ike na ike. I meela okwukwe na ihe omuma n'ime anyị. Ị bụ ikike anyị, anyị hụrụ gị n'anya ma mee ka gị na Nna anyị nyere gị nye gị otuto.
Gịnị ka mkpughe nke aha Nna ahụ pụtara site n'aka Jizọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)